[Ankapobeny ] 14 Febroary, 2009 09:48
Hipoka tanteraka i Mahamasina
Na asaina mando fidirana 75.000 Fmg aza izahay hiaro ny safidinay t@ 2006 dia vonona izahay ho avy hameno ny kianja hoy ny olona hiaro ny 54% azon'Ingahy Ravalomanana t@ fifidianana. @ 11 ora sy 45 minitra izao ary efa feno ny gradin ary tonga hatreny @ atsasaky ny kianja ny hamaron'ny olona ankehitriny. Maina tsara ny andro eto Antananarivo fa tsy toy ny t@ alarobia lasa teo.
Tonga eny Mahamasina ny Filoha Ravalomanana Marc @ 12 ora sy 45 mn izao! hikiaka tsy misy hifandrenesana eto @ kianja ankehitriny. Mitsanga avokoa ny olona eto Mahamasina izay nolazaina moa @ ilay onjam-peo iray oe voavidy vola 75.000 Fmg de mandeha moa ny vazivazy oe koa raha tsy ny etsy 13mai koa ny antsika 250.000Fmg lol. Resaka tsy mitombina na izy ara no inona @ izao fanany efa tapitra fongana izao dia handany vola @ napa ve? Asa aloha!!!
Saika tsy afaka niteny ny filoha Ravalomanana marc fa niantsoantso mafy ny vahoaka oe "sambory TGV sambory TGV". Na izany aza dia nilaza ampahabemaso indray izy fa vonona ny hiresaka satria samy malagasy oe. Aza mamaly fiantsina ianareo hoy izy fa izaho kosa tsy hamela anareo irery ary hiaro ny safidinareo ihany koa. Nihoraka tsy nisy fijanonana intsony nanomboka teo ny olona ny onja mandeha ihany ny tehaka sy ny sihoka. Mitovy @ ireny Barea mahafaty baolina ireny ny hafalin'ireo mpanohana azy. Tsy nisy nanampo koa moa oe hoavy i Ramose!!! lol
Ny ankilany etsy @ 13mai kosa @ io dia manedry ireo minisitra ihany. Ary nilaza ny tgv oe hanatitra minisitra @ alatsinainy. Dia efa raharaha tadiavina ny an'izay manaraka azy @ izany. Izy rahateo tsy manery akory fa sitrapon'ireo izay mpitolona io ka tsy misy azo hanomezana tsiny azy. Nifarana moa ny fikomina avy eo ka nisy ny ampahan'olona niseho be loha oe hiantsy ny eny mahamasina nony avy eo ary niazo iny RM1 iny ny andihana olona vitsy dia vitsy manao feloha orange. Sady mandeha ihany ny hogahoga sy ny siotsioka nifanehatra tokoa t@ ireo vahoaka ny Mahamasina ry zalahy tao anaty ny tonelina ambohidahy ka vaky nirifatra nanao taridositra niverina. Nihomehezany iretsy farany fotsiny.
Ny manahirana kely ny saiko fotsiny dia ny maheno ny vavaka misandratra etsy @ 13mai rehefa hanomboka ny kabary. Tsy ilay mivavaka akory no ratsy fa ilay fo tsy madio manantanteraka azy. Satria na inona na inona dia karazana fikomina io atao eo io. tsy mifanaraka @ soratra masina izany. Miala tsiny aho fa mety hanafitohana ny sasany indray izao ity soratro farany ity an!
Manome fanampim-baovao eo avy eo.